Warar Goos goos ah oo 07-12 November 2009 Ruunkinet (Click)
Amaanka Garroowe iyo Boosaaso oo xalay la adkeeyay ka dib dilalkii habeen hore
Amaanka magaalooyinka Boosaaso iyo Garoowe ee Puntland oo dhawaan ay ka dhaceen dilal qorsheysan. ayaa si aad ah xalay loo adkeeyay, iyadoo bandow aan hore loo shaacinna lagu soo rogay Garoowe.
Dad ku sugan caasimadda maamulka Puntland ee Garoowe, ayaa sheegay in ay xalay ciidamo fara badan oo ka socda maamulkasi dadka ku amrayeen inay ku xaroodaan guryahooda islamarkasina ay sidoo kale goobaha ganacsi dadka u sheegayeen inay xiraan.
Sidoo kale ciidamamada amaanka ee Puntland aya iyaguna xaafado kamid ah Boosaaso ka sameynaayay roondo amaanka la xiriirta.
Madaxweynaha maamulkaasi Puntland C/raxmaan Faroole oo hadda Nayroobi ku sugan, ayaa ugu yeeray ciidamada iyo dadweynuhuba inay iska kaashadaan amaanka maamulka guud ee Puntland.
Habeen ka hor ayay aheyd markii magaalooyinkaasi lagu dilay xildhibaan maamulka ka tirsanaa iyo guddoomiyihii maxkamadda darajada koowaad ee Puntland.
UN-ka oo xafiisyada arrimaha Soomaaliya khuseeya ee Nairobi oo Muqdisho ka fureysa
Qaramada Midoobay, ayaa qorsheyneysa inay xafiis kafurato magaalada Muqdisho, waxana shalay saraakiil QM ka tirsan ay arrimahaasi u gaareen magaalada Muqdisho.
Wafdi uu hogaaminayay kuxigeenka wakiilka QM ee Soomaaliya Charles, ayaa shalay kulan la yeeshay golaha wasiirada dowladda Soomaaliya.
Kullanka ay wada yeesheen golaha wasiirada oo uu hogaaminaayay raysal wasaare Cumar Cabdirashiid iyo saraakiisha QM, ayaa waxaa soo dhaweyay dowladda Soomaaliya.
Afhayeenka raysal wasaaraha Soomaaliya C/qaadir Walaanyo, ayaa sheegay in wafdiga QM ay dib ugula laaban doonaan wixii kulanka ay layeesheen madaxda dowladda ka soo baxay xafiiska QM, islamarkasina dhawaan la qorsheynaayo in xafiisyada QM loo soo raro Muqdisho si arrimaha Soomaaliya khuseeya ee QM loogala socdo isla Muqdisho, halka hadda lagala socdo magaalada Nayroobi ee dalka Kenya.
Hore ayaa waxa wakiilka QM ee Soomaaliya Ahmed Walad Abdalla, uu u sheegay inay sameyn doonaan qad cagaaran oo gudaha Muqdisho ah halkaas xafiisyada QM ay degi doonaan.
Mareykanka oo Gariiga ku qal qaalinaya ciidamo ilaaliya gaadiid badeedkooda mara badweynta Hindiya
Wafdi ka socda midowga mulkiilayaasha maraakiibta dalka Gariiga ee marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaan ( U.G.S) ayaa kulan magaalada Washington kula qaatay masuuliyiin ka tirsan waaxda amuuraha dibadda Maraykanka iyagoo ka wada xaajooday khatarta ay burcadb badeeda ku yihiin howlaha gaadiid badeedka caalamka ee ku gooshaya xeebaha Soomaaliya meel ilaa 1000 mile ka baxsan biyaha Soomaalia.
Mareykanka ayaa u soo jeediyay shirkadaha gaadiidka badda ee Gariiga inay sameystaan ciidamo gaar ah oo ilaaliya maraakiibta iyo doonyaha mara xeebaha Soomaaliya.
Agaasimaha UGS ugu qaybsan arimaha Midowga Yurub iyo kuwa caalamiga ah ayaa saraakiisha waaxda amuuraha dibada Maraykanka kala hadlay muhiimada ay leedahay sii ambaqaadida iskaashiga howlahan iyadoo xooga la saaray sidii shirkadaha maraakiibta ee midowgan hoostaga ay u samayn lahaayeen wax uun ay maraakiibtooda uga difaaci karaan burcad badeeda.
Kooxo burcad badeed Soomaali ah ayaa dhawaan qafaashay maraakiib iyo doonyo ganacsi, iyadoo kuwa la qafashayna ay ku jiraan markab dalka Gariiga laga leeyahay.
Kooxo dabley ah oo dhac u gaystay gari ay laheeyd hayad samafal oo ka howlgalasha Baladweyne
Hay'adda Save The Childaren UK xafiiskeeda Magaalada Beledweyne . ilo xog ogal aha oo ku sugan magaladaasi ayaa sheegay in dablayda aya u kaxaysteen gariga xaafada howlwadaag oo ay gacanta ku hayan kooxaha ka soo horjeeda dowlada somaliya
hayadaha ka howlgala magalada baladweyne ayaa walaac ka muujiyay dhacasi . iyagoona ku baqay in wax laga qabto arintasi ugubka ah
Waa markii ugu horreysay oo gaari u shaqeynaya mid ka mid ah Hay'addaha Samafalka loo dhaco arrrimo la xirira is heysiga Ururada ku loo lamaya Siyaasadda dalka, waxaana lagadhur sugaya Jawaabta ay arrintani ka bixin doonaan Mas'uuliyiinta Ururka Xisbul Islaam ee hadda ka taliya Magaalada Beledweyne.
arintani ayaa ku soo beegmaysa xili ururka xisbul islaam uu maamul u sameeyay magaalada beledweyne
Dagaal ka dhacay deegano hoos yimada gobalka Bakool
Dagaalo u dhaxeeyay Ciidamada taabacsan Dowladda KMG iyo Xarakada Alshabaab ayaa xalay ka dhacay meel u dhow Degmada Xudur ee Gobolka Bakool, iyadoo dagaalku ahaa mid culus.
dadka deeganka aya sheegay inay maqalayeen xalay oo dham daryanka madafiicad aya is weedarsanyeen labada dhinac ee dagalka uu u dhaxeeyo.
Dagaalkan ayaa la sheegay in ay soo qaadeen Ciidamada Dowladda ee maalmahan abaabulka dagaal ka waday Deegaanka Yeed, kuwaasoo horay wacad ugu maray dagaal ka dhan ah Alshabaab.
Ilaa iyo hada wax badan lagama oga dagaalka, hase ahaatee waxaa jira qasaare kala duwan oo uu geystay, kaasoo aan ilaa iyo hada si dhab aha loo ogeeyn qasaraha
Ma jirto cid ka hadashay labada dhinac dagaalka, waxaana saraakiil ka tirsan Dowladda horay u sheegeen in ay duulaan ku yihiin Gobolada Bay iyo Bakool
dagalakni ayaa ku soo beegmaya xili gudoomiyahii gobalka bay c/fatax geesey uu sheegay in ay dowlada ka goantahay inay la wareegaan gacan ku haynta gobalada bay iyo bakool
Nin dhalashadiisa ay tahay somali oo holand lagu xiray
Ninkaan ay xirtay Dowladda Holland ayaa waxa ay ku sheegtay in uu ahaa nin magan galyo doon ah waxa ayna shegeen in ay ka so qabteen xero megan galyo doon ah oo ku taala meel 75 Km kaga began dhinaca waqooyi ee Magaalada Amsterdam.
Ninkaan ay dhalashadisu tahay Somaaliya ayaa waxaa shegtay in uu jiro 43 sano isla markaana uu ku nolaa Gobolka ay somaalidu degto ee Marekanka ee Minneapolis ka hor intii uusan ka soo anba bixin bishii November ee sanadii 2008 waxa uuna Dalka Holland uu tagay bil ka kadib markii uu ka soo amba baxay Dalkaasi Marekanka.
si kastaba ha ahatee ninkani aya lagu ee deeyay inuu gacan siinayay xoogaa ka dagaalama dalka somaliya
iyadoo dadka somaliyeed ay dhacdadani ka naxeen
Dhagaxtuur oo xilkii gobolka banadir maanta iska wareejiyay
Xaflad ay xilalka ku kala wareegayaan Gudoomiyihii xilka laga qaaday ee Gobolka Banaadir Maxamed Cismaan Cali Dhagaxtuur iyo Eng. C/risaaq Nuune ayaa ka ka dhacaday Xarunta Maamulka Gobolka Banaadir.
Munaasabadan ayaa waxay tahay mid ay Maamulka iyo Xafiisyada Gobolka ay kula kala wareegayaan labada maamul, iyadoo ay Khudbado ka jeedin ka jeediyeen goobta Xaflada ka dhacaday .
Gudoomiyaha cusub ee Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho Eng. C/risaaq Nuune ayaa dadaal ugu jira inuu hanto Maamulka guud ee Gobolka si uu u dar dar geliyo howlihiisa
ku aadan wax qabashada arimaha amaanka
mr nuune ayaa sheegay in muhiimada ugu horaysa ee diirada uu sari doono ay tahay wax kaqabashada arimaha saboolnimada isaga oo sheegay in dhibaatada somaliya ay tahay faqriga ka jira dalka
gudoomiyaha cusub ee gobalka banaadir eng. c/risaq nuune ayaa xilakan loo magacabay maalmo kahor waxaan horyala arimo badan oo ay ka midtahay wax qabashada amniga muqdisho oo ah goobaha ugu xun xaganabad galayada dalka somaliya
Xildhibaano ka soo horjeestay mamul xisbul islaam ay degmada baladweyne ka sameeyeen
Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka oo ka soo jeeda Gobolka Hiiraan ayaa gaashanka ku dhuftay Maamul uu Ururka Xisbul Islaam kaga dhawaaqay Gobolka Hiiraan, kaasoo ay ku tilaamaameen mid aan sharci ahyan a
Xildhibaan C/raxmaan Jimcaale ayaa sheegay in Maamulka uu yahay mid aan ku imaan rabitaanka shacabka, isla markaana uu yahay Maamul ay dad gaar ah ay wataan oo dadka reer Hiiraan aanay matalin.
"Maamulkaas waa maamul gacan ku rimis ah, mana ahan mid ka turjumaya rabitaanka dadka reer Hiiraan, Maamul waa inuu noqdaa mid dadka ka yimaada ama ay Dowlad u magacowdo"ayuu yiri Xildhibaanka.
Dhinaca kale sarakiil Ciidamada Dowladda ka tirsan ee ku sugan Kala Beyr
ayaa sheegay inay ay ka soo horjeedaan Maamulka halkasi laga sameeyay.iyag oona sheegay in magalada baladweyne ay dib ugu soo noqon doonaan
sarakiisha waxa ka mid ahaa aadan garase oo ka mid ahaa sarakiisha dowlada ee gobalka hiiraan looga italka roonaday
magalada baladweyne ee gobalka hiiran waxaa iminka gacanyta ku haya kooxda xisbul islaam oo maamul u sameeyay ka dib markii ay kala wareegeen gacan ku haynta degmadaasi ciidamada dowlada oo halkasi ku sugnaa
Magaalada Beledweyn oo dagaalo ay ku soo noq noqdeen ayaa waxay mudooyinkii u dambeeyay aheyd mid dadka reer hiiraan ay kaxumadeen dagalada aan dhamadka la heyn ee ku soo noqnoqda gobalkasi
Hayad FAO OO QAYLO DHAN KA SOO SARTAY XAALADO NOLOL XUMO OO LA SOO GUDBOONATAY 20MILYAN OO QOF
Hayadda cuntada iyo beeraha u qaabilsan Qaramada Midoobay ee magaceeda loo soo gaabihyo FAO ayaa shaaca ka qaaday in ugu yaraan 20 milyan oo qof oo ku nool Bariga Afrika, isla markaana Soomaali ka mid tahay ay si deg deg ah ugu baahan yihiin gargaar cunto oo deg deg.
Warbixin oo ay hayadu ka soo saartey xarunteeda magaalada Roma ayay ku sheegtey in dadkaasi hadii aan lala soo gaarin gargaar deg deg ah ay la soo gud boonaandoonto xalad halis ah
"Xaalada ayaa waxaa sii xumeeyay markii ay soo bixi waayeen dalagii beeraha iyo cawskii taasi oo hayda ay ku macnaysay meelaha qaar oo abaro ay ku dhufteen isla markana ay ka jirto biyo yari bahsan" ayaa lagu yiri warbixinta FAO
sidoo kale hayda waxaa ay ku sheegatay in coladaha ka sii socda wadamada qaar aya curyamiyeen habsami u socdka ganacsiga oo ay dad badan ku tiirsanaayeen
wadamada ugu daran ee xaldaha xun ay ka jiraan ayaa hayad FAO ay ku tilmamtay somalia iyo suudaan
Kenya ayaa waxaa la sheegay in 3.8 milyan oo qof ay la soo daristey xaalad dhibaato oo cunto laaan, iyadoo tacabka galeyda oo ah dhaqaalaha ugu weyn ee Bariga Afrika uu hoos u dhacay.
Itoobiya ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay warbixinta FAO in dad gaaraya 6.2 milyan oo qof ay saameyn cunto laaan ku habsatey ka dib markii ay yaraadeen roobabkii la filayey iyo tacabkii beeraha oo aan si wanaagsan u soo bixin
hayada aya FAO ayaa sidoo kale timaamtay in goobaha dadka aya ku dhibataysan yahiin ay ku jiran Congo, Waqooyiga Nigeria, Koonfurta Nijer, Mali
iyadona hayada ugu baqaday calmaka in wax laga qabto dhibatda haysata 20milyan ee qof
Ururka xisbul islaam oo maamul u sameeyay degmada Baladweyne ee gobalka Hiiraan .
Kulan balaran oo manta ka dhacay magaladasi oo ay ka soo qeyb galeen masuuliyiin katirsan xisbul islaam oo gacanta ku haya magaladaasi ayaa gudoomiye u doortay
Sheekh Shuuriye Faarax Sabriye iyadoo halkii lagu magacaabay gudoomiyahaasina ay ka hadleen saraakiil ka tirsan Ururka Xisbul Islaam
ururka xisbul islaam ayaa sheegay inay dhamays tiri doonan dhismaha maamulka degmada hiiran
magacabista ururka xisbul isalam ayaa ku soo beegmaysa xili gudoomiyihii gobalka hiiraan ee maxkamadaha islamka uu isku dhiibay ururka ahlusuna waljameeca
Madaxweyne Shariif oo si qarsoodi ah Muqdisho uga dhoofay kana qeyb galaya kulanka madaxda Islaamka ee Ankara
Madaxweynaha dowladda KMG ah ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo wafdigiisa, ayaa maanta ka qeyb galaya kulan madaxda caalamka Islaamka ay ku yeelanayaan magaalada Ankara ee dalka Turkiga.
Wafdiga madaxweynaha oo ay ku jiraan wasiiro dowladda Soomaaliya ka mid ah, ayaa waxa kulanka ay ka qeyb qaadan doona uu socon doona laba cisho oo maanta ay ku jirto.
Ka hor kulanka maanta ka furmaya Ankara, ayaa waxa jirtay in wasiirada ganacsiga ee dowladaha Islaamka ay kulan ku yeesheen Ankara kuwaas oo ka wada hadlay arrimo dhowr ah oo ganacsiga dalalkaasi quseeya.
C/rashiid Maxd Cirro, wasiirka ganacsiga dowladda KMG ah ee Soomaaliya, ayaa sheegay kullanka ay la qaateen wasiirada kale ee dowladaha caalamul Islaam uu ku dhamaaday is afgarad iyo in ganacsiga la iska taageero.
Madaxweyne Shariif ayaa la filayaa in uu madaxda caalamka Islaamka uu kaga warbixiyo xaaladaha dalka Soomaaliya iyo in taageero loo fidiyo dowladda uu madaxda ka yahay isaga.
Maalin ka hor ayay wafdiga madaxweynaha uga dhoofeen Muqdisho si qarsoodi ah oo aanay saxaafadda iyo dadkuba ka warqabin.
R/Wasaare Sharmaarke iyo safiirka Spain ee Kenya oo wada hadlay
Raysal wasaaraha Soomaaliya Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke oo shalay soo gaaray magaalada Nairobi, ayaa kulan la qaatay safiirka Spain u fadhiya Kenya.
Labada mudane ayaa waxay ka wada hadleen arrimo ku saabsan doonida kalluumeysi ee Spain ee Alakrana iyo shaqaalaha saaran, oo ay heystaan kooxo burcad badeed Soomaali ah.
Md. Cumar Cabdirashiid Cali ayaa sheegay in dowladdiisa ay wixii karaankeeda ka geysan doonto sidii loo sii deyn lahaa la heystayaasha iyo doonida kalluumeysi.
Spain ayaa sidoo kale ka laabatay goaan ahaa inaanay marnaba xiriir la sameyn doonin kooxaha burcad badeedda si ay ugala hadasho arrimaha la heystayaasha.
Burcad badeedda, ayaa ku heysta doonida Alakrana iyo shaqaale 36 gaaraya oo 16 ka mid ah Spanish yihiin, kuwaas oo hadda shuruudo ku xiray sii deyntooda, taas oo ay ka mid tahay in la sii daayo laba ka mid ah kooxaha burcad badeedda oo ay xireen ciidamada badda ee Spain markii qafaalka Alakrana uu dhacayay.
Spain ayaa sheegtay inay maxkamad saareyso labada ruux ee Soomaalida ah ee loo heysto burcad badeednimo.
Ciidamo tababar loogu soo xiray Carmo
Taliska ciidamada booliska dowladda KMG ah ee Soomaaliya ayaa degmada Carmo ee gobalka Bari ugu soo xiray 600 oo askari, oo 60 kamid ah ay ahaayeen dumar tababar boolisnimo oo socday muddo afar bilood ah.
Xaflad ka dhacday xarunta tababarka ciidamada booliska ee Carmo, ayay xaflad arrinkaasi ku saabsan shalay ka dhacday taas oo ay soo qaban qaabiyeen dowladda KMG ah ee Soomaaliya iyo maamulka Puntland.
Taliyaha ciidamada booliska dowladda Soomaaliya General Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid, oo ka hadlayay munaasabaddii xiritaanta tababarka ayaa ku bogaadiyay ardadii dhameystay tababarka inay u dhabar adeegaan u shaqeynta dalkooda.
Munaasabadii xiritaanka tababarka waxa sidoo kale ka qeyb galay masuuliyiin ka tirsan maamulka Puntland oo uu ku jiro wasiirka amniga Cabdullaahi Saciid Samatar.
Carmo, waxay ka mid tahay meelaha laga soo saaro booliska dowladda KMG ah ee Soomaaliya, waxana dhowr jeer oo hore tababar loogu soo xiray askar boolis ah kuwaas oo dowladda KMG ah ee Soomaaliya hadda la shaqeeya.
Al-shabab: Haweenka iyo ragga gaadiid ma wada raaci karaan
Xoogaga Al-shabab ayaa ka mamnuucay meelaha ay ka taliyaan in raga iyo dumarka gaari isla raacaan, amarkaasi oo aan wali si rasmi ah loo shaacin in uu ka soobaxay maamulka sare ee Al-shabab.
Saaka ayaa mar qura goobaha gaadiidka dadweynaha laga arkaayay xoogag ka tirsan Al-shabab oo daraawalada iyo dadkuba ku amrayay inaanay raga iyo dumarka gawaari isla raacin.
Amarkaasi ayaa waxa uu durbaba ka dhaqan galay meelaha qaar ee Shabaabku ka arrimiyaan.
Hore ayay Al-shabab u soo rogeen awaamiiro ay ku jiraan inay haweenka xirtaan Jalbaab adag iyo sigsaan, iyadoo amaradaasina ay ka dhaqan galeen meelaha ay arrimiyaan ee gudaha Muqdisho.
Sheekh C/raxmaan Macow oo isku dhiibay Ahlu-Sunnah
Guddoomiyihii hore ee Hiiraan ee maamulkii Maxaakiimta Sheekh C/raxmaan Macow, ayaa ku biiray ururka Ahlu Sunnah waljameecah ka dib markii uu qilaaf soo kala dhex galay isaga iyo maamulkii Xisbul Islaam oo uu isla dhawaantan ku biiray.
Macow, oo kulamao la qaatay madax ka tirsan Al-shabab iyo Xisbul Islaam ka hor intii aanu ka goosan dowladda KMG ah ee Soomaaliya, ayaa ugu dambeyn markii uu ku biiray Xisbul Islaam ay Baladweynana la wareegeen lagu qanci waayay hab maamulkiisa.
Ururka Xisbul Islaam ayaa sheegay inay hub ka dhigis ku sameeyeen Macow ayna maamul kale u sameyn doonana Hiiraan, taas oo isna uu ku qanci waayay.
Deegaanka Goobo ee isla gobalka Hiiraan katirsan, ayuu kulamo kula qaatay shalay madax ka tirsan Ahlu-Sunnah Waljameecah, waxana taasi ay keentay in ugu dambeyn uu Guriceel gaaro.
'''Annaga uma naqaan wax dhaafsiisan in uu yahay Shiikh C/raxmaan Ibraahim Macow, laakiin waa dhici kartaa qofku ku wareero Waayaha iyo Waqtiga jira, sidaa daraadeed cid kasta oo ka tirsan kooxaha naga soo horjeeda sidan oo kale ayay noogu soo laaban doonaan ayuu yiri Shiikh Cumar Sheekh Maxed Faarax oo ka mid ahaa culimadii Goobo kula kulabtay Macow ee Guriceel-na ku soo dhaweysay.
Wararka qaar ayaa sheegaya in Sheekh C/raxmaan Macow uu gaadiid dagaal iyo hub gacmeed uu la tagay Guriceel kuwaas oo ku wareejiyay maamulka Suufiyada ee ka jira magaaladasi.
Madhab baa in gudoomiyahii hore ee Maxkamadaha G/hiiran uu isku dhiibay xoogaga ahlusuna wal jameeca ee ku sugan wabxo
Sida ay sheegayaan Saraakiisha Kooxda Ehlu Suna Waljameecah waxaa hogaankooda isku dhiibay Gudoomiyihii hore ee gobalka Hiiraan C/rixmaan Macow, oo maalmihii ugu dambeeyey ay xurguf hoose kala dhaxaysa Xarakada Xisbul Islaam, oo ay isku hayeen qaabka loo maamulayo magaalada Baladweyne.
HADALKAN KASOO YEERAY AHLUSUNA ayaa lugu sheegay in C/rixmaan Macow uu kala soo baxsaday Xisbul Islaam afar ka mid ah baabuurta dagaalka, balse ay labo ka mid ah kala hareen, halka uu hada ku wareejiyey Ehlu Suna gaadiid dagaal oo dhan labo baabuur oo ay ku xiran yihiin qoryaha boobayaasha fudud iyo hubab kale.
Kooxda Ehlu Sun ayaa sheegtay in ay dagaal adag kula jirto, waxa ay ugu yeertay nadbada inay ka soo horjeedan Soomaaliya, oo ay ula jeedaan dhinacyada ka soo horjeeda Siyaasadooda, ee Al-Shabaab & Xisbul Islaam,waxaana kooxdan ay hubkooda qaateen sannadkii ayna ka soo gudubnay ee 2008-da Bishii November, markaas oo ay Al- Shabaab bilaabeen in ay dhulka la simaan qabuuro kor udhisnaa, oo aysan ogoleyn Shareecada Islaamku.
Is dhiibida uu waqtigan Ehlu Suna isku dhiibay C/rixmaan Macow ayaa noqonaysa mid ka mid ah Isdhiibkii ugu horeeyey oo uu hanaanka Ehlu Suna isku dhiibaan, rag madax mar ka soo noqday dhinacyada ka soo horjeeda dawladda Faderaalka ee KMG ah.
C/rixmaan Macow oo ay la hadashay saxafada ayaa ka gaabsaday kahalida arrimahan, wuxuuna sheegay in uu hada ka maqan yahay magaalada Baladweyn, balse wuxuu rajo wanaagsan ka muujiyey in uu dhawaan dib ugu laaban doono magaaladaas, isagoo sheegay in uu howlo usoo gaaray meelo ka mid ah gobalka Hiiraan, waa sida uu hadalka udhigaye.
kaso koow hadalkaan ka soo baxay ahlusuna majirto ilo madax banaan oo xaqiijinaya arinkan
Xaalada goobahii dagaalada ay ka dhaceen ee W/muqdisho oo degan Maanta
Waxaa degen xaalada Degaanada Shibil iyo Boondheere magaalada Muqdiso Xarunta gobolka Banaadir ahna Magaalo Madaxda Dalkan Soomaaliya, ka dib markii shalay gelinkii dambe ay ka dheceen dagaalo xoogan oo u dhaxeeyay ciidamada dowlada iyo xoogaga Ka soo horjeeda. dagalkasi oo qasaro aya ka soo gartay dad rayid ah oo aalaba aya waxa ka soo garan dagalada muqdisho ka dhaca
Waxay dagaaladaasi yimaadeen ka dib markii ciidamo ka tirsan Dowlada KMG ah ay soo faarujiyeen qeybo ka mid ah degmada Shibis halkaas oo ay soo gaareen xoogaga Dowlada ka soo horjeeda
Dagaalka ayaa aha mid fool ka fool ah islamarkaana la isku adeegsanayay hubka Noocyadiisa kala duwan oo guud ahaan laga maqlayhugunka madaafiicad laysku ridayay Muqdisho Xaafadaheeda kala duwan
Tiro kor u dhaafeysa 5Qof ayaa ku geeriyooday dagaalkaasi waxaana ku dhaawacmay dad iyagu intaasi ka badan, sida ay xaqiijiyeen Dad goob joogayaal ah oo ka agdhow deegaanka uu dagaalku ka dhacay .
Xaalada iminka waa mid degen waxaana dib u soo laabtay isusocodkii dadka iyo ganacsiga faraku tiriska ahaa ee deegaanada lagu dagaalamay, ku haray inkastoo maalinimadii shalay ilaa xalay uu uu hakad ku jiray cabsiyo dagaal iyo dagaal soconaya awgood